18 May, 2020 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa gacanta ku haya eedeymo la xiriiro musuq maasuq oo loo haysto Masuuliyiin ka tirsan Wasaaradaha Xukuumadda Somaliya.
Arrimo musuq maasuq oo markii hore loo xiray Agaasime-yaal ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Somaliya ayaa markii dambe ku fiday Wasaarado kale.
Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa sheegay in cadeymo lagu hayo Masuuliyiinta u xiran eedeymaha ah inay musuq maasuq kaceen.
Xeer Ilaaliyaha Qaranka ayaa sidoo kale sheegay in xubnahaasi ay horkeeni doonaan maxkamadda, kolka ay Gorsoore-yaasha soo muddeeyaan maxkamadayntooda.
Isagoo la hadlayay BBC ayuu tilmaamay in xafiiskiisa uu musuq maasuqa ula dagaalami doono, si lamid ah la dagaalanka lagula jiro kooxaha argagixisada ee dalka ka dagaalama.
"Waxaan rabaa inaan kuu sheego musuq maasuqa xafiiskeyga wuxuu ka taagan yahay meel aad u adag. La dagaalanka musuq maasuqa iyo la dagaalanka argagixisadu isku meel bay xafiiskeyga ka taagan yihiin.” Ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Qaranka.
Xeer Ilaaliyaha ayaa yiri "Sida Shabaabka loola dagaalamayo oo la rabo in wadanka looga xoreeyo, oo maalin kasta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay dhiigga u shubayaan, sidaasoo kale baa xafiiskeygu wuxuu waajibka koobaad ka dhigtay in umadda Soomaaliyeed musuq maasuqaan aafeeyay laga dhameystiro, lagana ciribtiro.”
Waxa sidoo kale uu meesha ka saaray wararka sheegaya in la siyaasadeeyay xariga Agaasime-yaasha Wasaaraaha Xukuumadda ka tirsan, isagoona isu sheegay in uu yahay qofka ugu xog ogaalsan kiiska ay u xiran yihiin.
"Kiiskan musuq maasuqa ah ee Wasaaradda Caafimaadka ka bilowday xogta aan ka hayo qof muwaadin ah oo ka hayo ma jiro. Anigaa baaris ku sameeyay, anigoo kaashanaya xafiiskeyga iyo Xafiiska Hanti Dhawrka Guud ee Qaranka. Qof meelaha ka hadlaya oo dhahayo kiiska waala siyaasadeeyay iyo siyaasad baa ku jirta, waa qof iska hadlay weeye.” Ayuu yiri Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka.